ကဗျာဆရာ စောဝေ သည် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေကို အာဏာရူးကြီးဟု ဝေဖန် ရေးသား မှုကြောင့် နိုင်ငံတော် အသရေ ဖျက်မှု ပုဒ်မ ၅၀၅ ဖြင့် မန္တလေးတိုင်း ရမည်းသင်း အကျဉ်းထောင်တွင် ထောင်ဒဏ် ၂ နှစ် ကျခံနေရသော ကဗျာဆရာတစ်ယောက် ဖြစ်သည်။ ကဗျာဆရာ စောဝေသည် ဗိုလ်ချုပ် ...
၁၉၃၂ တွင် ရန်ကုန်၊ ဗဟိုအမျိုးသမီးဆေးရုံ ဂျမန်ခါနာ၌ ၁၁ လမ်းနေ ဦးဘခိုင်၊ ဒေါ်ကြီးမေတို့က မွေးဖွားသည်။ မောင်မြင့်သိန်းမှာ အမည်ရင်း ဖြစ်သည်။ ၁၁ လမ်းအနီးအနား၌ နာမည်ကျော် အငြိမ့်အဖွဲ့၊ ဇာတ်အဖွဲ့များ ရှိသည်။
ဦးစံမြင့် သည် မြန်မာနိုင်ငံသား စစ်မှုထမ်းဟောင်း၊ တိရိစ္ဆာန် ဆေးဘက်ဝန်ထမ်းနှင့် သရုပ်ဆောင် ဖြစ်သည်။ ဗြိတိသျှအရာရှိအဖြစ် သရုပ်ဆောင်များသောကြောင့် သခင်ကြီး ဟူသော အမည်နှင့် ပို၍ လူသိများသည်။
ဆရာကြီးဦးစံလွင်ကို ၁၉၃၈-ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ ၁၀ရက်နေ့တွင် အဖဦးသန်းမောင်၊ အမိ ဒေါ်ချစ်တို့က ရန်ကုန်မြို့၌ မွေးဖွားသည်။ ၁၉၄၅-ခုနှစ်မှ ၁၉၄၉-ခုနှစ်ထိ မူလတန်းပညာကို ရန်ကုန် ပညာရေးတက္ကသိုလ် လေ့ကျင့်ရေးကျောင်း၊ ၁၉၅၀-ခုနှစ်မှ ၁၉၅၅-ခုနှစ်အထိ အထက၁ဒဂုံတွင် ပ ...
ဦးစံသာအောင် သည် မြိုလူမျိုး နိုင်ငံရေးသမား တစ်ဦးဖြစ်ပြီး မြိုတိုင်းရင်းသားဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီကို တည်ထောင်သူ ဥက္ကဋ္ဌ ဖြစ်သည်။
၁၉၆၈ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ၉ရက်၊ အင်္ဂါနေ့တွင် ရေနံချောင်းမြို့၊ သူဌေးကုန်းရပ်ကွက်၌ ခမည်းတော်ဦးစိန်ဝင်း၊ မယ်တော်ဒေါ်သိန်းသိန်း တို့မှ ဖွားမြင်သည်။ ၁၉၈၄ ခုနှစ်တွင် ဆယ်တန်းစာမေးပွဲကို ရေနံချောင်းမြို့၊ အထက၁မှ ခြောက်ဘာသာ ဘာသာစုံ ဂုဏ်ထူးဖြင့် မြန်မာတစ်နို ...
Samuel Kim Arredondo သည်အမေရိကန်ဖွားတောင်ကိုရီးယားအဆိုတော်ဖြစ်သည်။ သူသည် ၂၀၁၅ 1Punch hip hop duo တွင်ပူးပေါင်းခဲ့သည်။ ၂၀၁၇ 2017ပြီလတွင်သူသည် Produce 101 Season2TV show တွင်ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးတွင်အဆင့် ၁၈ တွင်ရပ်တည်ခဲ့သည်။ ပြိုင်ပ ...
ဆစ်ဆရို မအူရအဧဆစ် သည် မှုခင်းဆေးပညာ မျက်နှာ ပြန်လည်ပုံဖော်တည်ဆောက်မှု၊ နှင့် လူသားနှင့် တိရစ္ဆာန် ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းအတု ပုံစံတူပြုလုပ်ခြင်းတို့တွင် အထူးပြုထားသော ဘရာဇေး 3D ဒီဇိုင်နာတစ်ဦး ဖြစ်ပေသည်။ ၎င်းသည် စပိန်သခင်၊ Padua ၏ သူတော်စင် အန်တိုန ...
ဆန်နေးလ် ဘဟာသီ မီတယ် ကို ၁၉၅၇ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၂၃ ရက်နေ့တွင် မွေးဖွားခဲ့ပြီး အိန္ဒိယနိုင်ငံ၏ ဆက်သွယ်ရေးလောက၌ အရေးပါသူ၊ လူမှုရေးကူညီတတ်သူ၊ Bharti Enterprise ၏ တည်ထောင်သူ ဥက္ကဋ္ဌနှင့် စီမံသူဒါရိုက်တာတစ်ဦးဖြစ်သည်။ ၇.၂ ဘီလျံဒေါ်လာလည်ပတ်ငွေကြေးကြောင ...
ဦးဆန်းဆင့် သည် မြန်မာနိုင်ငံသား နိုင်ငံရေးသမားဖြစ်ပြီး အစိုးရဝန်ကြီးဟောင်းနှင့် တပ်မတော် အရာရှိဟောင်း တစ်ဦး ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၃ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီတွင် သာသနာရေး ဝန်ကြီးဌာန ဝန်ကြီးအဖြစ် သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်က ခန့်အပ်ခဲ့သည်။ ထိုအချိန်က သူသည် ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ...
ဆအိတို အဆုခ သည်ဂျပန်လူမျိုး အဆိုတော်၊ သရုပ်ဆောင်နှင့် ဖက်ရှင် မော်ဒယ်တစ်ယောက်ဖြစ်သည်။ သူသည် ဂျပန်လူမျိုး မိန်းကလေးအဖွဲ့ Nogizaka46 ၏ ပထမမျိုးဆက် အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်သည်။ sweet ဖက်ရှင်မဂ္ဂဇင်း အတွက် ပုံမှန်မော်ဒယ်‌တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး CUTiE မဂ္ဂဇင်း အတွက် ပင် ...
ဆာ ပက်ချာတာ သည် ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံရှိ ခမာနီခေါင်းဆောင် ပိုပေါ့၏ သမီးဖြစ်သည်။ ပိုပေါ့သည် ကွန်မြူနစ်ဝါဒကို လွှမ်းမိုးအောင်လုပ်ရင်းက ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံတွင် အကြွင်းမဲ့ အာဏာရှင်စနစ်ကို ထူထောင်သွားသူ တစ်ဦးဖြစ်သည်။ သူ့လက်ထက်တွင် လူပေါင်း တစ်သန်းကျော် ...
၁၉၇၃ ဩဂုတ် ၂၁ နေ့တွင် မွေးဖွားသူ ဆာဂေး မီခေးလိုဗစ် ဘရင် သည် ရှရှား-အမေရိကန်လူမျိုး ကွန်ပျူတာ သိပ္ပံပညာရှင်၊ စက်မှုလုပ်ငန်းရှင်တဦးဖြစ်ပြီး အင်တာနက်အသုံးပြု ရှာဖွေရေးနှင့် ကုန်ပစ္စည်းကြော်ငြာခြင်းလုပ်ငန်း အဓိကလုပ်ကိုင်သည့် ကမ္ဘာ့ အကြီးဆုံးအင်တာနက်က ...
ဒေါက်တာဆာဆာကို ပညာရေးချို့တဲ့ကာ ဆင်းရဲသော မိဘနှစ်ပါးမှ ချင်းပြည်နယ် လိုင်လင်းပီဒေသတွင် မွေးဖွားခဲ့သည်။မိခင်မှာ မွေးဖွားရက်ကို မပြောပြနိုင်သဖြင့် သူ၏မွေးနေ့ကို မသိရှိရပေ။ ဝေးလံခေါင်ဖျားသော ထိုဒေသတွင် ပညာကို ကြိုးစားသင်ယူခဲ့ကာ မိဘဆွေမျိုး၊ ဒေသခံမျာ ...
ဆာဗစ်ထရီဂျင်ဒယ်သည် အိန္ဒိယစတီးလုပ်ငန်း၏ ဩဇာတိက္ကမရှိသူတစ်ဦးဖြစ်သည့် အပြင် အိန္ဒိယတွင် အချမ်းသာဆုံးနှင့် ကမ္ဘာပေါ်တွင်လေးဆယ့်လေးယောက်မြောက် အချမ်းသာဆုံးအမျိုးသမီးဖြစ်သည်။ သူမသည် Jinda Steel and Power Limited and JSW steel ၏ အုပ်ချုပ်ရေးနှင့် မသက်ဆ ...
ဆာ့ချ် ဒက်ဆော့တ် ကို ၁၉၂၅ ခုနှစ် ဧပြီလလ ၄ ရက်နေ့တွင် မွေးဖွားခဲ့ပြီး ပြင်သစ်ကုန်သည် နှင့် ရှေးရိုးစွဲနိုင်ငံရေးသမားတစ်ဦးဖြစ်သည်။ Forbes မဂ္ဂဇင်းအရ ၂၀၀၆ ခုနှစ်တွင် သူသည် ၅၆ ယောက်မြောက် ကမ္ဘာ့အချမ်းသာဆုံးလူဖြစ်သည်။ သူသည် Dassault အဖွဲ့ကို တည်ထောင်ဆ ...
မြတ်စုခိုင်ကို ၁၉၉၂ ခုနှစ် ဧပြီလ ၃၀ ရက်နေ့တွင် ရန်ကုန်မြို့၌ မွေးဖွားခဲ့သည်။ မွေးချင်း ၃ ယောက်အနက် ဒုတိယသမီး ဖြစ်ပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဖြစ်သည်။ အစ်မတစ်ယောက်၊ မောင်တစ်ယောက် ရှိသည်။ ရန်ကုန်လေ့ကျင့်ရေးကျောင်းတွင် တက်ရောက်ခဲ့ပြီး စင်ကာပူနိုင်ငံ Republic P ...
ဆုထက်ကို စက်တင်ဘာ ၅၊ ၁၉၉၄တွင် ရန်ကုန်၌ မွေးဖွားခဲ့သည်။ သူမတွင် အစ်ကိုတစ်ယောက်ရှိသည်။ အထက ၁ ဒဂုံမှ အထက်တန်းအောင်မြင်ခဲ့ပြီး နိုင်ငံခြားဘာသာတက္ကသိုလ် ရန်ကုန်တွင် အင်္ဂလိပ်ဘာသာရပ်ကို သင်ကြားခဲ့ကာ ၂၀၁၅ခုနှစ်တွင် ဘီအေဘွဲ့ ရရှိခဲ့သည်။
ဆုန်းဂျီဟို ဟု အများကသိကြသည့် ချွန်းဆူယွန်း သည် တောင်ကိုရီးယား အမျိုးသမီး သရုပ်ဆောင်တစ်ဦး ဖြစ်သည်။ Running Man အစီအစဉ်၏ ပင်တိုင်အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်သဖြင့် နိုင်ငံတကာအထိ နာမည်ကျော်သည်။
ဆုပန်ထွာ သည် မြန်မာလူမျိုး အမျိုးသမီး သရုပ်ဆောင်တစ်ဦးဖြစ်သည်။ ၁၉၈၂ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၇ ရက်နေ့တွင် ရန်ကုန်မြို့၌ မွေးဖွားခဲ့ပြီး အမည်ရင်းမှာ ရဲနန္ဒသူ ဖြစ်သည်။ ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ မှာ ဗုဒ္ဓဘာသာ ဖြစ်သည်။
၁၉၇၈ ခု၊ ဇွန်လ ရက်တွင် မွေးသည်။ ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်တွင် ဆက်ဆံရေးဘာသာ Communication Arts ဖြင့် အဆမ်းပရှင်း တက္ကသိုလ်မှ ဘွဲ့ရသည်။ ထို့နောက် ထိုင်း​လေ​ကြောင်း၏ ​လေယာဉ်မယ် ဖြစ်လာသည်။
၁၉၉၄ ခု၊ မတ်လ ၂၂ ရက်တွင် ကချင်ပြည်နယ်၊ ဖားကန့်၌ ဦးထွန်းအောင်ကြည်၊ ဒေါ်ရင်ရင်သောင်းတို့မှ မွေးသည်။ ကချင်-ရခိုင် သွေးနှော ဖြစ်သည်။ မွေးချင်း ၅ ယောက်အနက် တတိယမြောက် ဖြစ်သည်။ ၂၀၀၇ ခုတွင် မိသားစုလိုက် ရန်ကုန်သို့ ပြောင်းလာရာ အထက၁ ဒဂုံ ၌ ကျောင်းတက်သည်။ ...
တမ်းပလိတ်:EngvarB ဆူကရီဝိဆယ်ကောင်း Sukrit Wisetkaew, ကို အများဖြင့် နာမည်ပြောင် Bie บี้ ; RTGS: Biဟု သိများပြီး၊ ထိုင်း ပေါ့အဆိုတော်နှင့် သရုပ်ဆောင် ဖြစ်သည်။ ထိုင်းတယ်လီဗေးရှင်းစွမ်းရည်ပြိုင်ပွဲ The Star တတိယအသုတ်တွင် လူစသိသည်။ The Star3တွင် fi ...
ဆူဇန် ကလာ့တ်တန် သည် Herbert နှင့် Johanna Quandt တို့၏ သမီးဖြစ်သည်။ ၂၀၀၉ ခုနှစ်တွင်တော့ သူမသည် ဂျာမနီတွင် အချမ်းသာဆုံးမိန်းမဖြစ်လာခဲ့ပြီး ကမ္ဘာတွင်တော့ ၃၅ ယောက်မြောက်အချမ်းသာဆုံးဖြစ်လာသည်။
’ ဆူဒါရတ် ကီယူရာဖန် သည် ထိုင်းနိုင်ငံ​ရေးသမားတစ်ဦးဖြစ်ကာ ထိုင်းရတ်ထိုင်းပါတီ၏ ယခင်ဒုတိယ​ခေါင်း​ဆောင်ဖြစ်သည်။ထိုင်းပန်ထိုင်း​ဖောင်​ဒေးရှင်း၏ ဥက္ကဋ္ဌလည်းဖြစ်သည်။ယခင်အစိုးရများလက်ထက်က ဝန်ကြီး၊ဒုဝန်ကြီး တာဝန်များလည်း ထမ်း​ဆောင်ခဲ့သည်။
အသက် ၁၅ နှစ်သမီးအရွယ်တွင် ယောက်ျား ရှစ်ဦး၏ အဓမ္မကျင့်ခြင်းကို ခံရပြီးနောက် လူကုန်ကူးခြင်းခံရသူများကို ရှာဖွေကယ်တင်ပေးသူ၊ ခိုကိုးရာမဲ့ အမျိုးသမီးတို့ဘဝကို နားခိုရာရှာပေးသူဖြစ်လာသည်” မိသားစုရဲ့ လုံခြုံနွေးထွေးတဲ့ စောင့်ရှောက်မှုကို ခံနေရသူတွေကတော့ ...
Kim Jun-myeon မေ ၂၂၊ ၁၉၉၁ တွင်မွေးဖွားသည်။)အနုပညာနာမည် Suho ဟု လူသိများသူ၊ သည်တောင်ကိုရီးယားအဆိုတော်နှင့်သရုပ်ဆောင်ဖြစ်သည်။​တောင်ကိုရီးယား -တရုတ် ​ယောက်ျား​​လေး အဆို​တော်အဖွဲ့ Exo နှင့်၎င်း၏အဖွဲ့ခွဲ Exo-K တို့၏ အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးလည်းဖြစ်သည်။ Suho သည်အ ...
ဆူးငှက် သည် မြန်မာနိုင်ငံသား စာရေးဆရာတစ်ယောက် ဖြစ်သည်။ ၁၉၅၉-ခုနှစ်၊ ဖေဖေါ်ဝါရီလ၊ နေ့ တွင် မန္တလေးမြို့ ဒေါင်းရိုးရပ်၊ စိုင်ပြွန်မင်းသားကြီးဝင်းအတွင်း၌ အဖ ဦးပေါလူ၊ အမိ ဒေါ်ချောရင်တို့မှ မွေးဖွားခဲ့သည်။ မွေးချင်းယောက်ရှိသည့်အနက် အငယ်ဆုံးဖြစ်ပြီး အမ ...
ပရိယတ္တိစာပေများကို တောင်စွန်း ဓမ္မဒူတတောရ၊ အမရပူရမြို့ မဟာဂန္ဓာရုံကျောင်းတိုက်၊ မန္တလေးမြို့ မစိုးရိမ်တိုက်၊ စစ်ကိုင်းမြို့ ဇေယျသိန် ပါဠိတက္ကသိုလ်၊ စစ်ကိုင်းမြို့ မဟာသုဗောဓာရုံ စာသင်တိုက် စသော ကျောင်းတိုက်တို့ရှိ ဆရာတော်များထံမှ နည်းနာခံယူ သင်ယူ ...
ဆောင်ကန် သည် တောင်ကိုရီးယား အမျိုးသားသရုပ်ဆောင်တစ်ဦးဖြစ်သည်။ Love Alarm ဇာတ်လမ်းတွဲများ၊ Sweet Home ဇာတ်လမ်းတွဲတို့တွင် သရုပ်ဆောင်မှုများကြောင့် ထင်ရှားလာသည်။
ဒေါ်ဆွေဇင်ထိုက်ကို ရန်ကုန်မြို့တွင် ၁၉၅၃ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၁၃ နေ့ရက်က မွေးဖွားခဲ့သည်။ အ.ထ.က၂စမ်းချောင်းမှ ၁ဝ တန်း အောင်ခဲ့ပြီး၊ ၁၉၇၇ ခုနှစ်တွင် ရန်ကုန် စီးပွားရေး တက္ကသိုလ် မှ B.Com. I.T. ဘွဲ့ ရရှိခဲ့သည်။ ၁၉၈၄ ခုနှစ်တွင် Burma Council of Account မှ စ ...
ဒေါ်ဇင်နီနီဝင်း သည် မြန်မာနိုင်ငံသား နိုင်ငံရေးသမားတစ်ဦးဖြစ်ပြီး မကွေးတိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ပခုက္ကူမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် ၂ ကိုယ်စားပြု တာဝန်ထမ်းဆောင်လျက်ရှိသည်။ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ရွေးကောက်ခံရချိန်တွင် သူမ၏အသက်မှာ ၂ ...
ဒေါ်ဇင်မာအောင် သည် မြန်မာနိုင်ငံသား နိုင်ငံရေးသမား၊ တက်ကြွလှုပ်ရှားသူနှင့် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်း တစ်ဦးဖြစ်ပြီး လက်ရှိတွင် နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးဌာန၏ ခေတ္တပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးနှင့် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ရန်ကင်းမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ် ကို ...
ဇင်ဝိုင်း သည် မြန်မာ့ရုပ်ရှင် ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင် တစ်ယောက် ဖြစ်သည်။ အဖ အငြိမ်းစား ဗိုလ်မှူးစိန်လွင်နှင့် အမိဒေါ်ရီရီရှိန်တို့မှ မွေးဖွားသည်။ အမည်ရင်းမှာ ဌေးလွင် ဖြစ်သည်။ မွေးချင်း ငါးဦးရှိပြီး စတုတ္ထမြောက် ဖြစ်သည်။ ဇင်ဝိုင်းတွင် သားနှစ်ယောက်ရှိပြီ ...
ဇဏ်ခီ သည် မြန်မာနိုင်ငံမှ ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်၊ အဆိုတော်၊ တေးရေး၊ ဂီတမှူး၊ ဇာတ်ညွှန်းရေးသူ၊ စာရေးဆရာ တစ်ဦးဖြစ်သည်။ ၁၉၈၁-ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လ ၂၅ ရက်နေ့တွင် မန္တလေးမြို့၌ မွေးဖွားခဲ့သည်။ အသက် ၁၃ နှစ်အရွယ်တွင် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု သို့ ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ပြီ ...
ဦးဇယ်ခေါင် သည် မြန်မာနိုင်ငံသား လော်ဝေါ်လူမျိုး နိုင်ငံရေးသမားတစ်ဦး ဖြစ်ပြီး အမျိုးသားလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ကချင်ပြည်နယ် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် ၃ ကိုယ်စားပြု တာဝန်ထမ်းဆောင်လျက်ရှိသည်။
ဇာဂနာ ခေါ် မောင်သူရ သည် မြန်မာနိုင်ငံသား စာရေးဆရာ၊ လူရွှင်တော်၊ သရုပ်ဆောင်နှင့် ရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာ တစ်ယောက်ဖြစ်သည်။ သူသည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ စစ်အစိုးရအား ပြစ်တင်ဝေဖန်မှုများကြောင့် မကြာခဏ ထောင်ဒဏ်ကျခံရသူလည်းဖြစ်သည်။ သူသည် မြန်မာအခေါ်အဝေါ် ဇာဂနာ ဆိုသည့ ...
၁၉၉၀ ပြည့်၊ မတ်လ ၁၀ ရက်တွင် ကလော၌ မွေးသည်။ ဖခင်မှာ ဝန်ထမ်းဖြစ်၍ နိုင်ငံအနှံ့ ပြောင်းရွေ့ ဝန်ထမ်းရသည်။ မွေးချင်း အစ်ကို ၁ ယောက်၊ မောင် ၁ ယောက် ရှိသည်။ စတုတ္ထတန်းတက်စဉ် မိဘများ ကွဲရာ ဖခင်နှင့် နေသည်။ မိခင်က ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်း ရှမ်းပြည်လွတ်မြောက်ရ ...
ဦးဇာနည်မင်း သည် မြန်မာနိုင်ငံသား နိုင်ငံရေးသမားတစ်ဦး ဖြစ်ပြီး ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ရွှေကူမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ် ကိုယ်စားပြု၍ တာဝန်ထမ်းဆောင်လျက် ရှိသည်။
ကာတွန်းဇိုဇမ်သည် ချင်းတိုင်းရင်းသား ကာတွန်းဆရာ တစ်ယောက်ဖြစ်သည်။ ချင်းတောင်တန်းထုတ်လိုင်ရွာတွင် ၁၉၅၆-ခု၊ ဇွန်လ၊ ၂၄-ရက်တွင် အဖ ဦးစီမန်ထောင်းနှင့် အမိဒေါ်ကျင်းခိုမန်တို့မှ မွေးဖွားခဲ့သည်။ မွေးချင်း - ၁၁ ယောက်ရှိပြီး အမည်ရင်းမှာ ဇမ်ကျင်ပေါ် ဖြစ်သည်။
မန္တလေးမြို့နှင့် ကချင်ပြည်နယ် ဗန်းမော်မြို့ နယ်ဖွား ဖြစ်သည်။ ၁၉၇၇ ခုနှစ်၌ ရန်ကုန်မြို့တွင် မွေးဖွား ကြီးပြင်းခဲ့သည်။ ပညာရေးတက္ကသိုလ် လေ့ကျင့်ရေးကျောင်း မှ တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း အောင်မြင်ခဲ့သည်။ ရန်ကုန် နည်းပညာ တက္ကသိုလ်သို့ တက်ရောက် သင်ကြားခဲ့ပြီး B. ...
ဦးဇေယျာအောင် သည် မြန်မာနိုင်ငံ ဆက်သွယ်ရေးနှင့် သတင်းအချက်အလက် နည်းပညာဝန်ကြီးဌာန၏ ဝန်ကြီးအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၃ ခုနှစ် ဩဂုတ်လတွင် ဆောက်လုပ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန ဝန်ကြီးအဖြစ် သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်မှ ခန့်အပ်ခဲ့သည်။ ၂၀၁၂ စက်တင်ဘာလမှ ၂၀၁၃ ဇူလိုင ...
၁။ အမည်ရင်း - ဦးသန်းအုန်း ၂။ မိဘအမည် - ဦးထွန်းအုံ + ဒေါ်ချော ၃။ မွေးသက္ကရာဇ် - ၁၈၊ ၄၊ ၁၉၅၈ ၄။ မွေးဖွားရာဒေသ - အင်းကုန်းရွာ၊ နတ်မောက်မြို့ ၅။ ကလောင်အမည်ခွဲများ - မောင်ဇေယျာ၊ မောင်သန့်စင်၊ ကိုယဉ်ကျေး၊ M.T.O.
ဇော်ဇော်ဦး သည် မြန်မာလက်ရွေးစင်ဘောလုံးသမားတစ်ဦးဖြစ်ပြီး မြန်မာ အမျိုးသား ဘောလုံးအသင်းနှင့် မြန်မာ ယူ-၂၃ ဘောလုံးအသင်းတို့တွင် နောက်တန်း ခံစစ်နေရာတွင် ကစားခဲ့သည်။ ၂၀၁၁ ဆီးဂိမ်းပြိုင်ပွဲတွင် မြန်မာ ယူ-၂၃ အသင်းနှင့်အတူ ကြေးတံဆိပ် ဆွတ်ခူးဖူးသည်။ လက်ရှ ...
ဦးဇော်ဇော် မှာ မြန်မာ့နိုင်ငံ ၏ ထိပ်တန်းစီးပွားရေးသမားတစ်ဦးဖြစ်ပြီး ဇနီးမှာ ဒေါ်သန်းသန်းဦးဖြစ်သည်။အခြားအမည်မှာ ဦးတင်ဆန်း ဖြစ်သည်။ မြန်မာဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်၏ ဥက္ကဋ္ဌ အဖြစ်ထမ်းဆောင်လျှက်ရှိသည်။
ဦးဇော်မင်း သည် မြန်မာနိုင်ငံ အမှတ်လျှပ်စစ်စွမ်းအား ဝန်ကြီးဌာန၏ ဝန်ကြီးအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူ ဖြစ်သည်။ တပ်မတော် မှ ဗိုလ်မှူးကြီးအဆင့်ဖြင့် အငြိမ်းစားယူခဲ့သည်။ ၂၀၁၂ ဩဂုတ် ၂၈ ရက်နေ့တွင် ဝန်ကြီးရာထူးမှ နုတ်ထွက်ခဲ့သည်။
ဦးဇော်မင်း သည် မြန်မာနိုင်ငံသား နိုင်ငံရေးသမား တစ်ဦးဖြစ်ပြီး အမျိုးသားလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် ၆ ကိုယ်စားပြု၍ တာဝန်ထမ်းဆောင်လျက်ရှိသည်။
သင်းအုပ်ဆရာ ဦးဇော်မင်း သည် ထိုင်းနိုင်ငံ အမ်စီအေအသင်းတော်တွင် စီနီယာသင်းအုပ်ဆရာအဖြစ် အနှစ်၂၀ကျော် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသူ ခရစ်ယာန်ဓမ္မဆရာတစ်ဦး ဖြစ်သည်။ ဖခင်မှာ ရန်ကုန်၊ ညီအစ်ကိုများ အသင်းတော်မှ သင်းအုပ်ဆရာ ဦးတင်မောင်တွန်းဖြစ်သည်။ ၁၉၈၉ ခုနှစ်တွင် ဆရာဖေ ...
ဦးဇော်မင်းလတ် သည် မြန်မာနိုင်ငံသား နိုင်ငံရေးသမားတစ်ဦး ဖြစ်ပြီး အမျိုးသားလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ရှမ်းပြည်နယ် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် ၁ ကိုယ်စားပြု၍ တာဝန်ထမ်းဆောင်လျက်ရှိသည်။
၁၉၆ဝ တွင် မန္တလေးတိုင်း အင်းဝအနီးက တံတားဦးမြို့မှာ မွေးဖွား။ - တံတားဦးမှာ ၉ တန်း အထိ ပညာ သင်ကြားခဲ့ပြီး၊ ၁ဝ တန်းကို ပြည်မြို့က အောင်မြင်ခဲ့သည်။ - ပြည် ဒေသကောလိပ်နဲ့ ရန်ကုန် စက်မှု တက္ကသိုလ်တို့ကို တက်ရောက် ပညာ သင်ကြားခဲ့ပြီး၊ B.E. Civil ဘွဲ့ရခဲ့သ ...
ဉာဏ်ဝင်း၊ ဦး (NLD)
တင်အောင်မြင့်ဦး၊ ဦး (သီဟသူရ)
တင်ဦး (ဗိုလ်ချုပ်ကြီး သူရ)
ဓမ္မဝီရိယ၊ ဒေါက်တာ (မဟာထေရ်)